Kuhle ukuba sekhaya ngemuva kokusebenza kanzima kosuku bese uxoxa nalabo bantu engxoxweni yevidiyo yama-roulette abahle impela futhi abafuna ukuxoxa nganoma yisiphi isihloko. Kepha kuyenzeka futhi ukuthi awufuni ngempela ukuxhumana nomuntu. Futhi-ke ukuthi ungasusa kanjani isivakashi? Noma kanjani ukuqala ingxoxo? Futhi uqeda kanjani? Futhi ngokuvamile, lapho ungathola khona abangena ezindaweni ezifanele? Yonke le mibuzo neminye eminingi ingaphendulwa nge-Chat Roulette. I-Roulette yengxoxo ingumthombo okhethekile owenziwe ukuze abantu bakwazi ukuxhumana ngaphandle kwezinkinga. Ukuze wonke umuntu abe nethuba lokukhetha umlingani kwezokuxhumana nokuthi uyakwazi ukukhuluma futhi aqede ingxoxo uma kukhona angakuthandi. Kuzo zonke lezi ezinye izimo eziningi, ingxoxo yezingxoxo ingahle ibe usizo. Lokhu kuyinsizakalo ethandwayo abantu emhlabeni wonke Sekuyiminyaka eminingi beyisebenzisa. I-Chatroulette iya ngokuqina nsuku zonke. Izigidi zamadoda nabesifazane, abafana namantombazane baya kulo mthombo futhi baxhumana. Baxhumana ngenhloso yenjabulo, ngenhloso yokuthola ulwazi lokuxhumana, ngenhloso yokuhlangana, ngenhloso yokuthola abangane kanye nabangane babo bomshado. Futhi kuyathokozisa. Iya kusayithi futhi uxoxe kungaba noma ubani. Kukhona, Yebo, imikhawulo, kepha mayelana nayo ngemuva kwesikhashana. Manje ake sibhekisise ukuthi kungenzeka yini ukuthi le ngxoxo ye-roulette online ikwazi.
Ngakho-ke, i-Chat Roulette inemithetho nemikhawulo yayo ethile. Sekukonke, le mithetho ilula futhi kungenzeka ukuhambisana nayo. Kepha ake sibheke imithetho eyisisekelo. Manje nazi:
Imikhawulo yeminyaka engu-
. Izivakashi ezingaxoxa kumele okungenani zibe neminyaka eyi-18.
Awukwazi ukuxoxa nganoma yini engxoxweni evinjelwe umthetho.
Awukwazi ukunikeza ngezinsizakalo zocansi.
, yonke into ehlobene nobuphekula ayikwazi ukukhushulwa.
awukwazi ukuthuka i-interlocutor nganoma yisiphi isizathu: ubulili, ubuhlanga, izintshisekelo, njll.
Ngokuyinhloko, le yimithetho eyisisekelo okufanele ilandelwe nakanjani. Ngaphezu kwalokho, kuyinto efiselekayo ukuxhumana ngenhlonipho futhi wamukele umdluliseli njengoba enjalo. I-Chatroulette yenza yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi izivakashi zizizwa zizethemba futhi zikhululekile kunoma yisiphi isimo. Kulokhu, kudalwe imithetho emincane eyenza impilo engxoxweni ilungele bonke abasebenzisi balesi sisetshenziswa esihle. Uma ulandela le mithetho, khona-ke ukuxhumana kuzobajabulisa. Futhi abangeneleli bazokwaneliseka futhi banikeze ithuba lokukhuluma futhi. Uma imithetho ingalandelwa futhi izikhalazo ezivela kwabanye abasebenzisi zitholwa, i-akhawunti yomsebenzisi ethola izikhalazo futhi ephula imithetho yengxoxo ingavinjwa. Noma imuphi umsebenzisi we-chat roulette angathunyelwa ekuvinjelweni uma wephula imithetho okufanele ibonwe.Ukuze uye engxoxweni uqobo bese uqala ukuxoxa, uzodinga okulandelayo:
ikhompyutha noma ucingo
Futhi ungaxhumana, njengoba besho, ngaphandle kokusikeka. Ungenza noma yini uqobo: ukuhleka, ukuhlekisa, ukuxabana, futhi ujabulele ukuzijabulisa nabantu abawuthandayo. Yilokhu okuheha iphrojekthi ye-Chat Roulette. Lapha ungaxhumana kuphela nalabo bantu abahle ngempela futhi ofuna ukuxhumana naye ngaphezulu. Inzuzo yokusebenzisa i-Chat roulette ukuthi awudingi okuningi ukuze uthintane. Vele ikhompyutha noma ifoni efanelekile ne-Intanethi. Yebo, ngisafuna imakrofoni. Futhi nakhu kungcono ukungagcini. Ngemuva kwakho konke, imakrofoni yekhwalithi enhle izonikeza ithuba elihle kakhulu lokuzwa kahle futhi ilethe imicabango yakho ku-interlocutor yakho ngezwi elimnandi nelishukumisayo, ngaphandle kokuphazanyiswa nezinye izinto ezingaphazamisa ikhwalithi yemikrofoni engalungile.
Ukuxhumana esizeni se-online chat roulette njalo kuletha injabulo ngesizathu sokuthi umsebenzisi ngamunye walesi sisetshenziswa unethuba elihle lokukhetha. Kepha phakathi kokukhetha, ake sibheke. Ngakho-ke, isinqumo singenziwa:
phakathi kwabangenisi be-
I-97 007 phakathi kwemali yokuxhumana: ikhokhwe futhi mahhala
phakathi kokuxhumana okujwayelekile nemodi yePrimiyamu
Ukukhetha kwabangeneleli kungakhokhwa noma kube mahhala. Lokhu kuzofakwa phansi kusisetshenziswa esithile umsebenzisi azikhethelela ukuxhumana. Kwezinye izinsizakusebenza bavunyelwe ukukhetha ubulili bomsizi ongenela mahhala, kepha kokunye abavunyelwe. Ngakho-ke, lapha udinga ukubheka imithetho nakuhlu lwemenyu yengxoxo.
Ukukhetha phakathi kwezici ezikhokhelwayo nezamahhala kuyabonakala. Kunoma iyiphi i-Roulette yengxoxo, ungakhetha noma uhlelo lokuxhumana olukhokhelwe noma lwamahhala. Into esemqoka lapha ukubheka lezo zinketho ezinikezwe kunoma yiziphi izimo.
Ukukhetha phakathi kokuxhumana ngemodi ejwayelekile nakwimodi ye-Premium nakho kunikezwa umsebenzisi ngamunye. Imodi ejwayelekile ivame ukunikezwa mahhala. Kepha ngePrimiyamu kufanele ukhokhe. Izindleko zingashintsha futhi zishintshe ngokuhamba kwesikhathi.
Ngakho-ke kukhona ukukhetha. Futhi umsebenzisi ngamunye uzenzela le nketho. Kwezinye izinsizakusebenza zalolu hlobo, kuhlinzekwa futhi ukuthi ungakhethi ubulili bokuxhumana kuphela, kodwa izwe labo abahlala kulo engingathanda ukukhuluma nabo. Futhi kwamanye amasayithi ungakhetha umsebenzi noma izintshisekelo zomshumeli wakho, kanye nobudala namanye amapharamitha. Isisetshenziswa ngasinye silawula lokhu kukhetha ngokubona kwaso. Ngakho-ke, lo mbuzo udinga ukucaciswa ngaphambi kokubhalisa kusisetshenziswa bese unquma ukuxhumana nge-inthanethi nomuntu ongena ngokungahleliwe.Zivela ngokuhlangenwe nakho. Ukuziphatha kwabasebenzisi nemithetho kubiza imigomo yabo. Akunemikhawulo eminingi kangaka kumasayithi wesimanje, kodwa akhona. Isibonelo, imikhawulo yobudala. Iminyaka yomsebenzisi akufanele ibe ngaphansi kweminyaka eyi-18.
Umsebenzisi akufanele asebenzise i-roulette yengxoxo eku-inthanethi njengeplatifomu yokukhangisa noma njengesayithi ogaxekile. Lokhu kwenqatshelwe yimithetho eminingi yalezi zisetshenziswa. Lokhu kuyaqondakala. Ngemuva kwakho konke, abantu beza lapha bezokuxhumana, hhayi ukuze babuke ezentengiso noma basabalalise ogaxekile.
Ezinsizeni eziningi ezinjalo, kusenqatshelwe ukuvala i-webcam ukuze kungacaci ukuthi ngubani okhuluma nawe. Ubuso be-interlocutor kufanele buvele ngaso sonke isikhathi. Kepha kwezinye izimo ungaxhumana hhayi ngekhamera yewebhu, kepha ngokuxoxa nangokuxhumana.
Ingxoxo yesimanjemanje ingavakashelwa ngendlela ezuzisa isivakashi. Ungasebenzisa ingxoxo kunguqulo ekhokhelwayo noma yamahhala. Lapho ukhetha inguqulo yamahhala, ungaxhumana kalula nanoma yimuphi umuntu. Ungavula futhi uvule ngokunembile uma kukhona okungahambi kahle. Kepha amanye amapharamitha nezinzuzo zisakhawulelwe uma uvakashela le ngxoxo mahhala.
Ukuvakasha okukhokhelwayo kunikeza amathuba amaningi esivakashi ngasinye. Imodi ekhokhelwe ikuvumela ukuba uvakashele isayithi ngokungaziwa kwezinye izinkundla zokuxoxa. Ingxoxo engaziwa ingadalwa ngokuqondile ukuze abasebenzisi bangakhangisi ukubukeka kwabo kulo mthombo. Ingadalelwa izinhloso ezingefani. Futhi ngezinhloso ezahlukahlukene. Ngokuhambela okukhokhelwayo, izinketho ezingeziwe zisebenza. Isibonelo, inketho yokwakha abahambisi abathandayo. Usebenza kahle kakhulu. Ngemuva kwakho konke, kuyaziwa ukuthi i-chat roulette inika ukukhetha kwabangeneleli abangahleliwe ngokuphelele. Kepha kwesinye isikhathi umdluliseli ujabule kakhulu ukuthi ngifuna ukuqhubeka nokuxhumana naye ngokuzayo. Inketho ekhokhelwayo yenza kube nokwenzeka ukwengeza abahlakani bakho abathandayo ohlwini lalabo ongaqhubeka nokukhulumisana nganoma yisiphi isikhathi.
Ngaphezu kwalokho, lapho ukhokhela ingxoxo, kukhona elinye ithuba: ukuxhumana kwangasese. Lokhu kusho ukuthi ukwazi ukuxhumana nomuntu othize bese wenza lokhu isikhathi eside. Uma uthanda ingxoxo, ungayiqhubeka ngokuhamba kwesikhathi.
Umsebenzi "wohlu olumnyama" uyatholakala kuzo zombili izinhlobo ezikhokhelwayo nezamahhala. Lokhu kusiza kakhulu inqubo yokuxoxa zombili kumodi yokuxoxa nakumodi yevidiyo.
Inzuzo enkulu yesikhathi esikhokhelwayo yingenxa yokuthi umuntu uthola amalungelo amaningi. Kepha ngokuvamile, uma ukhetha ukuxhumana kwamahhala, akekho oyokhubazeka ekuxhumaneni. Ngokuphambene nalokho, inqubo yokuxhumana uqobo ngeke ihlupheke kancane uma kukhululekile.Isibonelo, amandla okukhetha ingxoxo yevidiyo nengxoxo. Yebo, noma imuphi umsebenzisi, akunandaba ukuthi ukhokhelwe noma angafinyeleleki mahhala kusisetshenziswa, angakhetha ukuthi uzokhuluma kanjani. Futhi unikele nge-interlocutor yakho ngale ndlela. Ukuxoxa noma ukuxoxa kumodi yevidiyo kungaholela abasebenzisi kubangani abasha noma kubantu abahle abazokwengeza imizwa entsha kanye nokuhlangenwe nakho okusha.
Kepha ngaphandle kokuxhumana okumnandi nabangeneleli abangahle, ingxoxo yezingxoxo ingafakwa nezinkinga ezithile. Isibonelo, ingozi. Labo abeza engxoxweni ye-roulette okokuqala bewela ezweni labazijwayele namathuba. Manje ake sibheke ukuthi yini okufanele uyinake ngokukhethekile lapho ukhulumisana nokuthi yini okufanele uhlale ukulungele:
Okokuqala, i-Chat roulette ifaka ushintsho olusheshayo nolula lwabalingani bokuxhumana. Lokhu kusho ukuthi ungashintsha umuntu olandelayo lapho ethinta inkinobho. Kuyajabulisa. Kepha ngasikhathi sinye, kufanelekile ukukhumbula ukuthi ungashintshaniswa ngokushesha futhi kwenye i-interlocutor. Ngakho-ke, kufanelekile nje ukuthi uzilungiselele lokhu.
Engxoxweni engaziwa, akekho owaziyo umuntu. Ungaqhamuka namagama amasha, izibongo, indawo yokuhlala. Ungasebenzisa noma yiluphi ulimi ukuxhumana, yize kunezingxoxo ze-roulette eziklanyelwe ngqo ulimi olulodwa. Isibonelo, isiNgisi. Noma isiRussia. Iningi lalawa masevisi lenzelwe izilimi ezihluke ngokuphelele. Ngakho-ke, lapha ungadlala ngokuphepha indima yomfokazi.
chat roulette ifaka ngokuyinhloko ukuzijabulisa, hhayi ukuqomisana okungathi sína. Ngakho-ke, ungayithatheli phezulu le nsiza. Lokhu ikakhulukazi kuyinsizakalo yokuzijabulisa, yingakho iye yathandwa. Futhi ungabheki lapha ukuthola abantu obajwayele kakhulu ukuze uqhubeke. Yize kukhona okuhlukile. Ikakhulu uma ukhetha insizakalo edumile esifundeni sakho noma ngisho nedolobha.
dating free iheha ama-scammers amaningi afuna ukwenza inzuzo kubasebenzisi abathembekile. Yize insizakalo yezokuphepha ihlala isebenza futhi iphendula ngokushesha ku-Chatroulette yanamuhla, ithuba lokuhlangabezana ne-scammer liselikhulu impela.
Ngaphezu kwabakhwabanisi, kukhona futhi zonke izinhlobo zabantu ezingabonisa izingxenye zomzimba ezingenqunu. Kujeziswa ngokuvinjelwa, kepha usengahlangabezana nobuntu obunjalo. Kulokhu, ungamane ubhale isikhalazo noma uchofoze inkinobho efanele.
Ingxoxo Roulette namuhla idonsela inani elikhulu labantu. Kuyajabulisa, kepha ngakolunye uhlangothi, ithuba lokuhlangana nobuntu obunganele liyakhuphuka. Ukuqondiswa kwamahlaya osebenzayo namahlaya ahlukahlukene nakho kuyathandwa. Isibonelo, abashicileli bakhethe i-chat roulette kudala. Futhi yisebenzise ukuze udume.Ungayibona kanjani i-prankster lapho uxhumana ku-Anti-Chat noma kunoma iyiphi enye i-chatou? Kusukela ngesikhathi sokuqala kungaba nzima, kepha nokho kungenzeka ukukwenza. Nawa amanye amaphuzu wokuhlonza ama-prankers:
Izingubo ezingejwayelekile zingahlinzeka ngemiklamo. Njengomthetho, bakha ividiyo yokuzijabulisa futhi bayilungiselela ngokucophelela. Izingubo zabo cishe zihlala zinobuciko futhi azijwayelekile. Izembatho kufanele zihambise i-interlocutor ibe yi-stupor cishe ukusuka kwesibili lokuqala lokuxhumana. Ngakho-ke, uma une-interlocutor phambi kwakho kumamaski noma ngezingubo eziwubukhazikhazi, khona-ke lokhu kungaba yi-pranker. Futhi uwena kuphela onganquma ukuthi ungaxhumana naye yini ngokwengeziwe noma ungamfuni omunye umuntu.
aqoshwa ukujabulisa futhi ngenxa yokuthandwa. I-Pranker ingaba nolaka noma, kunalokho, muhle kakhulu. Angenza okuthile okuphikisana nemikhuba yokuziphatha evunyelwe ngendlela evamile.
inhloso yabo ukurekhoda imizwa nokuphendula kokuziphatha kwabo. Bazama lokhu futhi bazama izindlela ezahlukahlukene. Kodwa umehluko wabo oyinhloko kusuka kuma-interlocriers ajwayelekile ukuthi benza okuthile okufanele kubangele imizwa eqinile ku-interlocutor: ukumangala, intukuthelo, ukuhleka, amahloni neminye imizwa enamandla.
Roulette wengxoxo kuyindlela yesimanje yokuxhumana kubantu banamuhla. Uma ungenaso isikhathi sokuya kubantu, uma unamahloni okuxhumana nabanye abantu, uma ungazi ukuthi unganqaba kanjani ku-interlocutor yakho, ingxoxo ye-roulette izoba yindawo enhle yokuqeqesha. Lapha ungafunda ukuqala ingxoxo nabantu ongabazi ngokuphelele. Lapha ungakwazi ukuxhumana kalula nalabo abathandile. Futhi yeka ukuxhumana nalabo abangathandi. Into esemqoka ukuthi uziphathe njengomuntu ngasikhathi sinye, ube ngumhumushi ohlekisayo futhi khumbula ukuthi ngakolunye uhlangothi kwesikrini kunabantu futhi. Ngubani futhi oze ku-Chat roulette ukuze ajabule nawe futhi uxoxe ngakho konke okusemhlabeni.